Nge-10 ka-Agasti ngeZodiac -Ubuntu obupheleleyo beHoroscope - Imiqondiso Yeenkwenkwezi
Eyona Imiqondiso Yeenkwenkwezi Nge-10 ka-Agasti ngeZodiac nguLeo-Ubuntu obupheleleyo beHososcope
Nge-10 ka-Agasti ngeZodiac nguLeo-Ubuntu obupheleleyo beHososcope
Umqondiso we-zodiac ka-Agasti 10 ngu-Leo.
Uphawu lweenkwenkwezi: Ingonyama . Oku kubhekisa kumntu owomeleleyo ngokweemvakalelo okhaliphileyo kwaye ethembekile. Lo ngumqondiso wabantu abazalwa phakathi kukaJulayi 23 no-Agasti 22 xa iLanga lithathwa njengeLo.
Inkqubo ye- Leo Constellation Isasazekile kwindawo engama-947 eekhilomitha phakathi kweCancer ukuya eNtshona kunye neVirgo ukuya eMpuma. Amanqanaba alo abonakalayo angama-90 ° ukuya kwi-° ° kwaye inkwenkwezi eqaqambileyo nguAlfa Leonis.
AmaFrentshi ayibiza ngokuba nguLeo ngelixa amaGrike esebenzisa igama elithi Nemeaeus ngophawu lwe-zodiac ka-Agasti 10 kodwa eyona mvelaphi yengonyama ikwiLatin Leo.
Uphawu olwahlukileyo: U-Aquarius. Oku kuphakamisa umtsalane kunye nobuntu kwaye kubonisa indlela abantu base-Aquarius ekucingelwa ukuba bamele ngayo kwaye banayo yonke into uLeo sun sign abantu abakhe bafuna.
Ukuziphatha: Kulungisiwe. Kutyhila ubunzulu kunye nokusebenza okukhoyo kubomi babo bazalwe nge-10 ka-Agasti kunye nokuba baphelelwe ngumonde kangakanani.
Indlu elawulayo: Indlu yesihlanu . Le ndlu ilawula iziyolo zobomi kodwa ngokwembono yolonwabo ukusuka kwimidlalo yobuntwana ukuya ekuhlaleni kwabantu abadala. Le yindawo echaza amandla, amandla kunye nokhuphiswano indawo uLeos akhetha ukuba kuyo.
Umzimba olawulayo: Ilanga . Le planethi kuthiwa ilawula ukujolisa kunye nokucwangciswa kwaye ikwabonisa ingqalelo yelifa. Ilanga likwabizwa ngokuba zizikhanyiso kunye neNyanga.
Isiqalelo: Umlilo . Eli nqaku libonisa abo bazalwe phantsi kwe-zodiac ye-10 ka-Agasti njengezithembekileyo kwaye zizele ngabantu abakhaliphileyo kwaye bafumana intsingiselo entsha ngokunxulumana nezinto, ukumodareyitha umhlaba, ukwenza amanzi abile okanye afudumeze umoya.
Usuku lwethamsanqa: iCawe . Le mini yempelaveki ilawulwa liLanga elifanekisela ukukhula kunye nokuba nakho. Ibonakalisa imeko ehlekisayo yabantu bakaLeo kunye nokuhamba ngokuzola kolu suku.
Amanani anethamsanqa: 2, 6, 11, 17, 20.
Ulwazi oluthe kratya ngo-Agasti 10 Zodiac ngezantsi ▼
Juni 1 Imihla yokuzalwa
yintoni eyenza umntu we-taurus akhohlise
yintoni i-horoscope kaJulayi 16
iingcebiso zesondo kunye nendoda ye-aquarius
I-gemini yindoda kunye ne-capricorn yabasetyhini
I-neptune kwindlu ye-10